Archive du 20170927
Fitokonan’ny Fitsarana Mandrahona hisambotra ny fanjakana
Tsy resa-be intsony fa raikitra ilay fitokonana faobe mandritra ny fotoana tsy voafetra hotanterahin’ny sendikan’ny mpitsara (SMM) sy mpiraki-draharaha (SGM) manerana ny Nosy.
Yang Xiaorong –masoivohon’i Sina « Mila fitoniana i Madagasikara raha te handroso »
Taorian’ny lehiben’ny vondrona eoropeanina dia masoivoho vahiny faharoa nilaza ny heviny momba ny raharaham-pirenena eto Madagasikara tamin’ity herinandro ity ny masoivohon’i Sina monina sy miasa eto amintsika Ramatoa Yang Xiaorong.
Leader Fanilo Ny filoha vaovao no manova ny lalàmpanorenana
Mitsipaka ny fikitiana ny lalàmpanorenan’ny Repoblika faha-4 ankehitriny io izahay, hoy ny antoko Leader Fanilo tarihan’Atoa Rabesa Zafera Antoine miaraka amin-dry Lalaina Berthnès sy Randrianambinina Alphonse.
Fifidianana 2018 Miketrika mafy Rajoelina sy ny ekipany
Samy manana ny paikadiny ireo mpanao politika tsirairay avy amin’ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny 2018. Ao ireo efa nanambara ny maha kandida azy hatry ny ela tahaka an’i Marc Ravalomanana
Fiziriziriana hikitika lalàmpanorenana Handray fepetra ny fiarahamonim-pirenena
Nanao fanambarana miaraka omaly ny fiombonamben’ireo fiarahamonim-pirenena na ny OSCs izay mivondrona ao anatin’ny hetsika Rohy sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy dia ny Transparency international sy ny sehatra tsy miankina Ivorary.
Fanovana Lalàmpanorenana Fandaniam-bola sy fampiesonana
Mbola miteraka adihevitra etsy sy eroa hatramin’izao ilay fanirian’ny fitondrana HVM hanitsy ny lalampanorenana, ka voaresaka manokana ny fikitihana ilay andininy faha-46 momba ny fe-potoana tsy maintsy hametraham-pialan’ilay filoha am-perinasa raha toa ka kandida izy.
Tolojanahary Maharavo « Mibaribary ny hagegen’ny fitondrana »
Nivoaka tamin’ny fahanginany indray ny filohan’ny vovonana politika Dinika ho an’ny fanavotam-pirenena na DFP,
Taratasin’i Jean Izao vao taitra
Miarahaba anareo hatrany ry Jean a ! Tena nisaiko rangahy ny teny hoe “manomana paikady” voalazanareo nandritr’izay 4 taona izay fa tsy arako intsony fa savolaina tanteraka aho nanisa azy aa! Izao ve rangahy ianareo vao taitra hoe ity ilay izy le !
Haify mampihavana Natao hanandratana ny sakafo vita Malagasy
Hanolotra sakafo malagasy azon’ny rehetra jifaina eny amin’ny kianjan’Andohalo manomboka ny sabotsy ho avy izao ny fikambanana WTA ao anatin’ilay hetsika : “Haify Mampihavana”andiany fahefatra.
Rahoviana ny fiadanana ?
“Hiadana sy ho finaritra, he sambatra tokoa izahay”, hoy ny voarakitra ao anatin’ny hiram-pirenena Malagasy.
Village Voara Andohatapenaka Hampiantrano ny Tsena K manomboka rahampitso
Hotanterahina etsy amin’ny Village Voara Andohatapenaka ny alakamisy 28 ka hatramin’ny sabotsy 30 septambra 2017 ny Tsena K. Mpitsidika mihoatra ny 10 000 no andrasana mandritra ity hetsika karakarain’ny fiangonana FJKM Ambohitantely ity. Sehatra iray mampifanindran-dalana ny nahandro sy ny asa tanana, ny varotra sy ny talenta ny Tsena K.
Ady amin’ny tsy fananan’asa Hofanina araka ny filana ireo mpianatra
Hofanina hifanaraka amin’ny filan’ireo karazana orinasa misy eto amintsika manomboka izao ireo mpianatra manovo fahalalana eny anivon’ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak’asa.